Amagumbi Okuhlambela | January 2022
Iingcamango zeTile zegumbi lokuhlambela ezingama-48-iBileplash yeBackplash kunye neMiyilo yoMgangatho
Ezi zindlu zokuhlambela ziyilo lisebenzisa iithayile phantsi, iindonga, kunye nokubuyela umva ukuze kwenzeke istayile. Fumana ukuphefumlelwa kwezi ngcamango zingama-48 zethayile yokuhlambela.
Iingcamango ezingama-30 zokuhlobisa izindlu zangasese kuHlahlo-lwabiwo mali- Umtsalane kunye nokuhonjiswa kwegumbi lokuhlambela elifikelelekayo
Sikhanyise iingcebiso ezingama-30 ngexabiso eliphantsi kunye ne-chic yokuhlambela isitayile kunye neehacks zokwenza isitayile, ngaphakathi ngaphakathi kufikeleleke ngakumbi. Qhubeka ufunda iitoni zezinto zokuhombisa izindlu zangasese kuhlahlo-lwabiwo mali lwe- $ 100 okanye ngaphantsi.
I-15 yeeNdawo eziGcweleyo zendlela engaphantsi kweTile yoyilo ngo-2021 - Iingcamango zethayile engaphantsi kwendlela yokuhlambela
Ngaphambi kokuba uphinde wenze indawo yakho, kuya kufuneka ujonge ezi zimvo zintle zethayile yangasese.
Imibala yepeyinti encinci yegumbi lokuhlambela siyayithanda-Amagumbi ePowder aMabala
Yenza igumbi lokuhlambela elincinci lizive likhulu ngokuluqinisa ngombala omnyama, oqaqambileyo, okanye wovavanyo. Vumela le mibala ye-18 yokupeyinta encinci ikhokele indlela.
Hlanganisa ingwevu nomhlophe kwaye ubone ukuba ithambile kwaye iyathomalalisa igumbi lakho lokuhlambela.
Iingcamango ze-Mirror ezingama-21 zegumbi lokuhlambela kwisitayile ngasinye - Ukuhonjiswa kweWall Wall
Sijikeleze izimvo ezingama-21 zesipili sokuhlambela eziqinisekileyo zokuphucula nasiphi na isithuba, nokuba siphi na ubukhulu, imilo, okanye isitayile.
Iingcamango ezingama-35 zeGumbi lokuhlambela eziSisiseko - Uyilo lwamaGumbi aKhulu okuhlamba
Nokuba linani elingakanani igumbi lokuhlambela endlwini yakho, i-master suite ifanelwe yeyona ibalaseleyo (kunye neyona nto imangalisayo!) Jonga. Jonga iinkcukacha kwezi ndawo zokuphumla kwaye mhlawumbi uya kuphefumlelwa ukuba unxibe eyakho i-spa yakho.
Iindlela zokuYila zegumbi lokuhlambela kwi-2019-Iitayile zeBathroom
Unyaka omtsha uzisa kunye neqela leendlela ezintsha zoyilo. Nantsi into eshushu kumagumbi okuhlambela ngo-2019.
Idepho yasekhaya ithengisa iingcango zokuhlamba iiglasi ezimnyama eziMnyama
Kukho iingcango zeshawari ezihonjisiweyo. Ungabamba iingcango ezimbini zala matte amnyama ebhafini yakho ngee-135 zeedola, okanye isibini seminyango eshawa ngokutyibilika nge-175 leedola kwiDepho yasekhaya.
Yintoni i-Walk in Shower? -Uhambo oluBalaseleyo kwiiMvula zeBhafu yakho
Ukuba ucwangcisa i-reno yangasese, kuya kufuneka uyazi ngokuthe ngqo ukuba zeziphi iindlela onokuthi ukhethe kuzo. Siphula yonke into oyifunayo malunga nemvula yokuhamba.
Iingcamango zeGumbi eli-30 lePowder-Igumbi eliLungileyo leDowder
Akukho nto yenza ukuba iindwendwe zive ngathi zithambekele ngaphezu kwegumbi elinomgubo. Nazi izimvo zokuhombisa, iingcebiso zoyilo kunye nemifanekiso yeentandokazi zethu.
Iingcamango ezili-10 ezigqibeleleyo zoYilo lweGumbi lokuhlambela lango-2018
Ukuba ucwangcisa i-reno yangasese, kukho imeko enzulu ekufuneka yenziwe ngokuthatha indlu yangasese yanamhlanje.
I-Tank yeTanki yeSitokhwe-Iitayile zeTanki zestock
Hambisa ngaphezulu, amachibi etanki lesitokhwe: Umkhwa omtsha usebenzisa le nto ifumanekayo yibhafu yetanki yesitokhwe.
Iimbono ezingama-20 eziGqibeleleyo zoYilo lwegumbi lokuhlambela
Nokuba ufuna ukuthatha okwangoku, okanye ufuna ukuhlala unyanisekile kwiklasikhi, ezi zindlu zangasese zigcwele zizinto eziphefumlelweyo.
Ngaphambili, isifundo esincinci sembali ngendlela izindlu zangasese ezipinki ezazithandwa ngayo, kunye neendawo zokuhlambela ezipinki zala maxesha ezivela kubaqulunqi bangaphakathi ukuze bakhuthazwe.
I-11 ye-Stylish Makeup Vanity Ideas-Iingcebiso ngeTafile yoLungelelwaniso
Ezi zimvo zililize ze-11 ziya kukunceda uhlale uhlelekile kwaye uzilungiselele kwisitayile, nokuba indawo yakho inkulu okanye incinci.
Iingcamango ezingama-28 zeShelf zeSitayile seGumbi lokuhlambela-Esona Sisombululo seSitayile sokuGcina iBhafu
Jonga ezi zimvo zingama-28 zishelufa zengqondo zokuhlambela, ukusuka kwindawo yokugcina eyakhelweyo ukuya kwiishelufa ezidadayo, iityhubhu ezisemgangathweni ukuya phezulu, kunye neefestile ezisebenza kabini.
Uyilo lweNdlu yangasese yama-20 -Izimvo zeGumbi lokuhlambela ezingaphelelwa lixesha
Imibala yebrash kunye nephepha lodonga? Hayi enkosi. Ezi zakhiwo zakudala zangasese ziziva ngathi ziyindawo yokuphumla enika ii-hues zazo ezintle kunye nezinto ezintle zokuchukumisa. Yongeza nje izilayi zekhukhamba zokuphelisa uxinzelelo kwangoko.
Amagumbi okuhlambela amaChic aMnyama ama-15-amaNqaku aMnyama aMhlophe naWokuhombisa
Vumela ezi zindlu zokuhlambela ezimnyama zilishumi elinesihlanu ukuze zikhuthaze ukulungiswa kwakho okulandelayo (okanye uvuselele iPinterest yakho).
Yenza iglasi yakho yokuhlamba iglasi ujonge ubuGcisa obuKhulu ngale ndlela ilula
Iishawari kunokuba nzima ukuhombisa, kodwa ngale nkqubo yamanyathelo mabini unganika igumbi lokuhlambela i-vibe entsha.
izibane zegumbi lokuhlala
igumbi elimnyama neliblowu
Isoftware yokuzoba isoftware
izimvo zokuhombisa igadi